Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny solika CBD sy ny solika CBD spectrum feno? - CBD Online Store
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny solika CBD sy ny solika CBD spectrum feno?
Ny vokatra feno menaka CBD Spectrum dia miakatra haingana amin'ny lazany noho ny tombontsoa ara-pahasalamana izay ao anatin'izany ny fanamaivanana ny olana amin'ny torimaso, ny fanaintainana, ny fivontosana ary ny tebiteby. Mety hainao tsara ny sasany amin'ireny fampiasana ireny, na izany aza, misy karazany roa ny vokatra CBD ao amin'ny Tsenan'ny CBD. Ianaro izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny CBD mitokana vs. menaka CBD feno spectrum, ao anatin'izany ny herin'ny tsirairay, ny fampiasana ampiasaina ary ny fomba hanapahana hevitra amin'ireo roa ireo.
INONA NY CBD SPECTRUM FENO?
Ny hemp na zavamaniry rongony dia fonenan'ny fitokimia an-jatony, izay misy ny cannabinoids toy ny, terpenes ary makiazy simika hafa. Ny solika CBD feno dia manondro ireo vokatra izay misy mihoatra ny fitambaran'ny CBD, toy ny molekiola zavamaniry hafa toy ny asidra matavy, THC ary terpenes dia mijanona ho simba. Ny menaka CBD feno spektrum dia matetika antsoina hoe menaka "zavamaniry iray manontolo" satria tafiditra ao ny makiazy feno ny fambolena zavamaniry.
INDRINDRA NY CBD?
Ny fitokana-monina CBD dia matetika antsoina hoe "CBD madio" na amin'ny CBD 99 ka hatramin'ny 100 isan-jato. Araka ny mety ho noheverinao tamin'ny anarana, ireo vokatra ireo dia nodiovina mba hampisaraka ny fitambaran'ny CBD tsy misy terpenes na cannabinoids fanampiny. Ny tanjaky ny CBD dia mazàna avo kokoa noho ny spectrum feno, midika izany fa fatra kely kokoa no anoroana azy.
NY FAMPIASANA NY SPECTRUM CBD feno menaka VS CBD ISOLATE
Ny solika CBD spektrum feno dia tsara kokoa noho ny mihinana mitokantokana CBD satria ny fikarohana dia mampiseho fa ny terpenes sy ny cannabinoïde dia miara-miaina eo amin'ny natiora ary rehefa atambatra dia mifanerasera amin'ny fomba mahasoa. Ity synergy ity dia antsoina hoe effet entourage ary inoana fa hanome CBD bebe kokoa hatrany amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana.
Ny fikarohana iray fikarohana nataon'i Ethan Russo, MD, dia nandinika ny tombotsoan'ny terpenes ao amin'ny spektrum feno CBD, mampiseho valiny mahavelom-bolo ho an'ny fepetra maro samihafa. Ohatra, ny fitambaran'ny terpenes caryophyllene pinene sy myrcene ary manampy ny toriteny, rehefa mampifangaro ny terpenes limonene sy cannabigerol (cannabinoid tsy dia fantatra loatra) dia mampiseho fampanantenana amin'ny fitsaboana MRSA. Na ny terpenes limonene sy synergized amin'ny CBD aza dia mahomby amin'ny fitsaboana anti-mony. Mampiseho izany ny fikarohana CBD feno spectrum dia bebe kokoa amin'ny traikefa amin'ny vatana manontolo.
Fikarohana fikarohana Israeliana iray hafa momba ny tanjaky ny Manokana ny CBD mifanohitra amin'ny spektrum feno CBD dia naneho fa ny CBD feno spectrum dia mahasoa kokoa amin'ny sehatry ny klinika ho an'ny toe-javatra toy ny tebiteby sy ny fivontosana. Ny CBD madio dia nahatonga ny "valin'ny fatra lakolosy", izay midika fa, rehefa nihoatra ny teboka iray ny habetsahan'ny CBD, dia nihena be ny fiatraikany ara-pitsaboana.
Na izany aza, tsy midika izany fa tsy mahasoa na oviana na oviana ny fitokana-monina CBD. Ny mpampiasa sasany izay mahatsapa manokana ny THC dia mitodika any amin'ny CBD mitokana mba handray soa amin'ny zavamaniry hemp nefa tsy misy ny effets effets psychoactive an'ny THC. Ireo izay manahy ny amin'ny fitsapana tsara ny THC dia aleony mitoka-monina CBD. Ankoatr'izay, ny fisintahan'ny CBD dia mamela ny mpampiasa hanoratra hoe ohatrinona ny CBD azony isaky ny fatra.
Tsara kokoa ve ny CBD mitokana sa feno SPECTRUM CBD?
Na misafidy ianao Fitaovana CBD feno Spectrum na mitoka-monina CBD, azo inoana fa hiaina ireo tombontsoa ara-pahasalamana ao amin'ilay orinasa rongony ianao. Miaraka amin'ny fandalinana misimisy kokoa, ny mpikaroka dia mianatra bebe kokoa isan'andro momba ny fahasamihafana misy amin'ireo karazana vokatra CBD. Ankoatr'izay, ho an'ireo monina any amin'ny fanjakana izay mbola tsy misy ny spectrum CBD feno, matetika ny CBD madio dia manome vahaolana ara-dalàna sy tsara. Na izany na tsy izany, ny CBD kely aza dia mahasoa noho ny tsy misy CBD mihintsy.
Emperora Mena CBD SPORITRUM OIL CBD feno
Ny Emperora Mena CBD dia manana kalitao avo indrindra Fitaovana CBD feno Spectrum amidy an-tserasera ary ny fitsapana ny antoko fahatelo anay dia manome antoka fa hahazo ny habetsahan'ny CBD ianao.